China Plastic imba midziyo yemagetsi Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Zvigadzirwa zvepurasitiki pamba Ndiro zita rizere rezvinyorwa zvemumba izvo zvakagadzirwa nepurasitiki seyakanyanya mbishi zvinhu.
Zvigadzirwa zvepurasitiki zvepamba zvakabatana zvakanyanya nehupenyu hwedu. Mumba mako, unogona kuona zvigadzirwa zvepurasitiki kwese kwese: mabheseni epurasitiki, mabhaketi epurasitiki, zvigaro zvepurasitiki, zvituru, mahwendefa, mabhurashi, mizinga, manera, mabhokisi ekuchengetera, nezvimwewo. , kugara. Mazhinji acho anogadzirwa kuburikidza nejekiseni kuumbwa.
Chipo bhokisi, firiji dhirowa, bhokisi rekuchengetera, bheseni repurasitiki, bhaketi repurasitiki, tswanda, keturu yepurasitiki
Midziyo yepurasitiki yemumba inoshandiswa kwenguva refu uye yakajairwa yekuchengetedza. Ivo vane hombe yemukati vhoriyamu uye zviri nyore kuisira. Izvo zvinodikanwa kuti utsungirire humwe huremu nekugara kwenguva refu.
Iyo saizi yakaenzana ndeye 300-500 mm pakureba uye hupamhi, uye izvo zvinhu zvinowanzo kuve PP kana PS.
2.Plastic tableware & dhishi
Dhishi, ndiro, bhokisi rekudya, bhokisi repurasitiki, bhata remichero, mukombe wemvura, Mapfumo epurasitiki, maforogo, zvipunu
Mahwendefa, makapu epurasitiki
Chikafu bhokisi, epurasitiki zvihwitsi bhokisi, muchero ndiro, mukombe wemvura, Mapurasitiki mapanga, maforogo, zvipunu ...
Hunhu hwemidziyo yerudzi urwu inonyatso chengeta kana kubata chikafu, zviwitsi, michero, mvura yekunwa zvichingodaro, zvine chekuita nehutano hwevanhu.
Mapurasitiki ese ane hunhu hwekuburitsa zvinhu zvinokuvadza pasi pemamiriro ekupisa kana kusangana kwenguva refu neacid, alkali kana mvura. Iyi midziyo yepurasitiki inoiswa yakanangana kana kusangana nezvinhu zviri pamusuwo, kunyanya makapu epurasitiki ane zvikafu, mabhokisi emasikati anopisa kana mbiya dzeplastiki, mapfumo epurasitiki nemaforogo, zvipunu uye masobho anopisa kana zvinwiwa kwenguva refu. Iyo epurasitiki zvinhu zvinofanirwa kutevedzera zvinoenderana nechikafu uye zvekurapa zviyero.
Naizvozvo, zvinodikanwa kusarudza zvigadzirwa zvepurasitiki zvine kugadzikana kuita nemazvo maererano nemamiriro ekushandisa, uye teerera nzira yekushandisa iri kushandiswa, dzivisa kushandiswa kwenguva refu, uye kuchenesa munguva.
3. Midziyo yemunhu:
Kusanganisira bhurasho rezino, muzinga, hairpin, magirazi furemu, kapu yepurasitiki.
Izvi zvinyorwa zvinhu zvemunhu uye hazvigone kushandiswa nevamwe kuona hutsanana uye hutano.
Izvi zvinhu zvinowanzo shandiswa iwe pachako kuona hutsanana, senge mabrashi emazino, mizinga, makapu emvura, kana kutakura newe, senge magirazi, hin'i dzemvere. Zvekubatana zvakananga nemuviri wemunhu, zvinodikanwa kugadzira maumbirwo akachengeteka uye kushandisa mapurasitiki asingakuvadzi, senge acrylic, PP, melamine zvichingodaro. Chitarisiko chinodawo runako, utsva uye kuzvimiririra.
4.Household midziyo yepurasitiki yemazuva ese
Kusanganisira hanger, brushes, manera, zvigaro, ladles, mapurasitiki mabheseni, fanera, kudiridza makani, maruva mapoto zvichingodaro. Izvi zvinhu zvishandiso zvinoshanda kana zvivakwa zvinoshandiswa muhupenyu hwezuva nezuva hwemhuri.
Rudzi rwemidziyo iyi inowanzo shandiswa midziyo yemumba, kunyanya ichitarisa pamabasa anoshanda, akanaka uye akasimba. Iko kune zvakajairika zvinodiwa kune epurasitiki zvinhu zvinoshandiswa, senge ROHS kutevedzera.
5. Mishonga yekurapa uye yehutsanana
inosanganisira mabhokisi ekurapa, majekiseni, mabhokisi esipo, matangi emarara, mabhokisi enyama, mafiroiro, mabhurashi, maturayiti, nezvimwe.
Dzinoshandiswa nemhuri kuchenesa nekuchengetedza nharaunda yakachena uye hutsanana hwemunhu. Uye zvishandiso uye zvekushandisa zvinodikanwa mukudzivirira uye kurapwa kwechimbichimbi kwekukuvara nezvirwere.
Kuchengeta yakachena uye noutsanana nharaunda ndiyo vimbiso kune vanhu yekudzora chirwere uye kurarama hupenyu hwakanaka. Zuva rega rega kuchenesa kunosanganisira maturusi akadai semutsvairo, magaba emarara, sipo nemapurasitiki.
Mabhokisi emishonga nemajekiseni ane mikana mishoma yekushandisa panguva dzakajairika, asi michina inodiwa. Kunyanya kana paine nhengo zhinji dzemhuri, kusanganisira vana, uye kana ivo vari kure nechipatara, zvakafanira kuti vazvichengete ivo pachavo nekurapwa, izvo zvinowanzo chengetedza yakawanda nguva uye mutengo, uye kunyange kuponesa hupenyu.
Pfupiso ye Hunhu hweMhuri Mapurasitiki Zvigadzirwa
Mhuri yezvigadzirwa zvepurasitiki zvemumba iri chikamu hombe chezvigadzirwa zvepurasitiki. Izvo zvinopenya uye zvakasiyana, zvine zvakasiyana zvinodiwa. Maitiro avo ekuumba uye maitiro anotaridzika kubva pane zvakajairwa jekiseni kuumbwa, zvigadzirwa zvekuumba kune yakakwira gloss, maviri-mavara jekiseni kuumbwa, kupisa kutsika, kudhinda kwemvura kudhinda, electroplating uye zvichingodaro. Izvo zvavakafanana ndezvi:
1. Kuchengetedzwa zvinodiwa: Kakawanda kubata nemuviri wemunhu kana chikafu, kushandiswa kwepurasitiki kune akasiyana matanho asina ngozi ekuchengetedza zvinodiwa;
2. Nyaradzo inodiwa: chigadzirwa chigadzirwa chinamirwa chinoenderana netsika dzekushandisa kwevanhu;
3.Zvinotarisirwa zvinodiwa pakuonekwa: chitarisiko chinofanirwa kuve chiri nyore kuziva, chakanakisa uye chakasununguka, kana ruvara rwune hupenyu uye rwakasikwa.
4. Zvinodiwa zvemhando yepamusoro: Kune makombi uye dzimba kuti zvive zvinoshanda uye zvinogara kwenguva refu, kune zviwitsi madhiri, madhiri emichero, magirazi mafuremu ave akajeka pamusoro.
Kuumba tekinoroji yezvinhu epurasitiki zvigadzirwa zvemumba zvigadzirwa zvepurasitiki zvinowanzo kuve nemusika mukuru unodikanwa. Panguva imwecheteyo, jekiseni kuumbwa zvinonyanya kudhura maturusi. Makuru maodha anofanirwa kugoverwa kuitira kuti vagovane mutengo wekugadzira chakuvhuvhu. Nekuda kweizvozvo, vazhinji vavo vanovimba nejekiseni kuumbwa kwekugadzirwa kwakawanda. Mould jekiseni ine zvakwakanakira zvepamusoro kunyatsoshanda, izvo zvinokodzera kwazvo pamwero mukuru maindasitiri ekugadzira. Chipfuwo, HIPE uye PP zvinonyanya kushandiswa muzvigadzirwa zvepurasitiki zvemumba. PVC, LDPE, PS, melamine haina kukuvadza thermoplastic plastiki. Kune zvinhu zvine ngozi zvishoma, vamwe vanoshandisa PMMA, PC uye ABS zvishandiso kuti vawane kuita kunodiwa. Mhuri zvigadzirwa zvepurasitiki zvinowanzoda kutsetseka, akajeka mavara, anopisa embossing, embossing, kutamisa mvura uye mamwe maitiro ekushongedza uye kuchengetedza pamusoro, uye kuwedzera ruzivo rwevashandisi. Nekudaro, Muzvinodiwa zvezuva nezuva-zvezuva nezuva, kusangana nezvinodiwa zviri kuwedzera zvevatengi vedu, isu takazvipira mukugadzira huwandu hwakazara hweMumba Midziyo YePurasitiki Zvikamu. Izvi zvinogadzirwa uchishandisa akanakisa mamakisi ezvigadzirwa uye anouya nekutsetseka kupedzisa. Isu tinogadzirisawo mararamiro edu maererano nezvinotsanangurwa nevatengi vedu. Kuti tikwanise kuwedzera zvido zvemusika, takazvipira kuburitsa dzakasiyana siyana zvigadzirwa zvepurasitiki. Kana iwe uine chero zvikumbiro, ndapota taura nesu. Isu tinopa nemoyo wese vatengi nezvakanaka, zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye masevhisi anoenderana nezvinodiwa zvako. Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo kana kotesheni.
Pashure: Plastiki yakadhinda kabutiro kavha
Zvadaro: Yakasimba epurasitiki yekuchengetedza bhokisi jekiseni kuumbwa